Lingua: Tetikasa Fandikan-teny Antserasera Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2018 18:15 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, македонски, srpski, Italiano, English
Tamin'ny Desambra 2006, nanapa-kevitra hamorona tetikasa iray ahafahan'ny mpandika teny an-tsitrapo misafidy lahatsoratra Global Voices hadika amin'ny fiteny samihafa ireo bilaogera nanatrika ny fihaonambe Global Voices tany Delhi. Tao anatin'ny roa taona monja, manana tranonkala amin'ny fiteny Bangla, Frantsay, Arabo, Albaniana, Shinoa, sy fiteny maro hafa izahay.
Leonard Chien aoTaiwan, no mpiara-mitantana ny Lingua miaraka amin'i Portnoy Zheng. Izy no namorona ny songadina ifandraisana mandrakitra ny fivoaran'ny tetikasa, anisan'izany ny fandikan-teny voalohany amin'ny fiteny tsirairay, ny fiaraha-miasa lehibe amin'ny fikambanana hafa, ny fitantaran'ny media momba ny tetikasa, ary ny dinidinika amin'ny mpandray anjara.
Claire Ulrich, izay mitantana ny Global Voices amin'ny teny Frantsay, no namorona sarintanin'ny fiarahamonina mpandika teny Lingua. (efa tsy mandeha intsony ilay sarintany)
13 Avrily 2021Ghana